AMBALAVAO - FIANARANTSOA : Andian-jiolahy tratra niaraka tamin’ny basy sy bala
Dimy mianadahy mivondrona ao anatina tambajotran-jiolahy iray no ravan’ny mpitandro filaminana, tany Ambalavao. 4 août 2017
Afak’omaly no niakatra Fampanoavana tao Fianarantsoa izy ireo ary naiditra am-ponja vonjimaika.
Nandravarava tamina Faritra maro manerana ny Nosy ireo andian-jiolahy ireto. Tsy ao anatin’ny Faritra Matsiatra Ambony ihany no lasibatra fa tonga hatrany amin’ny sisin-tany. Toeram-pivarotana lehibe iray tany Manakara no notafihiny iray volana lasa izay. Fanadihadiana niainga avy amin’ity farany no nahatratrarana azy ireo, herinandro vitsy lasa izay. Araka ny vaovao voaray dia raim-pianakaviana iray no maty tsy tra-drano notifirin’ireto olon-dratsy tamin’io fanafihana io, vehivavy roa hafa kosa no naratra mafy ary najifa ny lelavola mitentina 44 tapitrisa Ariary.
Nitsoaka avy hatrany ry zalahy rehefa nahavita ny asa ratsy.
Ny fikarohana sy ny fanadihadiana nataon’ny mpitandro filaminana tany Manakara no nahalalana fa olona avy any Ambalavao ireto nanafika ireto.
Teo no nandeha ny fikarohana ka niafara tamin’ny fahatratrarana azy dimy mianadahy ireto. Ny efa-dahy no fantatra fa mpanatanteraka ny asa ratsy mivantana raha mpampiantrano azy ireo kosa ilay vehivavy. Nandritra ny fisavana natao no nahatratrarana ireo entana maro be halatra niaraka tamin’ny basy sy bala fampiasan’izy ireo rehefa manafika. Voaporofo fa nanaovana ireo halatr’omby niseho lany tao Ambalavao ireto basy tratra ireto. Efa any am-ponja izy mianadahy ireto amin’izao fotoana izao.